Shirkii Nairobi waa la qabanayaa - BBC News Somali
Shirkii Nairobi waa la qabanayaa
Image caption Ergayga Xoghaya Guud ee Qaramada Midoobay Augustine Mahiga
Magaalada Nairobi ayaa maanta looga dhawaaqay in uu bisha April 12-kaada ka dhici doono shir sare oo wadatashi ah oo ku saabsan siyaasadda Soomaalida.
Ergeyga Xoghayaha Guud ee QM, Dr. Augustine Mahiga, ayaa sheegay in heshiiskii Djibouti uu waajib isaga uga dhigayo in uu ka shaqeeyo wada hadalka dhinacyada siyaasadda Soomaaliya. Wuxuuna ku tilmaamay in shirkani ahaan doono wada tashi ay Soomaalidu yeelato, wakiillada beesha caalamkuna ay ka ahaan doonaan kor joogto.
Dr. Mahiga wuxuu ugu baaqay dhammaan hoggaamiyayaasha Soomaalidu in ay muujiyaan in ay ka go'an tahay in hore loo mariyo nabad raadinta Soomaaliya oo ay markaa shirka ka soo qeyb galaan.
Go'aankani wuxuu ka dambeeyay, wadatashi ay maanta yeesheen wakiillo ka socda gobolka iyo caalamkaba kuwaas oo daneeya Soomaaliya.
Shalay ayay Xukuumadda Soomaaliya soo saartay war ay ku diideyso ka qeyb galka shirkaas iyada oo ku tilmaantay in uu caqabad ku noqon karo horumarka ay dowladdu sameyneyso.
Dowladda Soomaaliya waxay ra'yiyo aan is waafaqsaneyn ka qabtaa waxa la yeeli doono afar bilood ka dib marka xilliga dowladda hadda jirtaa uu dhammaado.
Baarlamaanku wuxuu qabaa in uu isagu sii jiri doono maaddaama uu go'aansaday in saddex sano uu xilligiisa ku darsado.
Waxaa intaa u dheer in uu doonayo in uu soo doorto Guddoomiye iyo Madaxweyne. Wuxuuna ku sii socday hawshaas isaga oo diyaariyay Guddiyo dhowr ah oo uu ka mid yahay Guddiga Doorashadu.
Laakiin Madaxweynaha waxay ugu muuqataa, in xilligiisa iyo kan baarlamaankani ay isku jaan go'an yihiin. Baarlamaan hor leh uun ayaa soo dooran kara Madaxweyne xilka igala wareega ayuu yiri.
Xagga Golaha Wasiirada, waraaq la sheegay inay iyagu soo saareen ayaa waxay ku taageereen saddexda sano ee uu baarlamaanku ku darsaday.
Laakiin markii dambe, waxaa uu Golaha Wasiirradu go'aan ku gaaray in hey'adaha Federaalka iyo Hoggaankooda hadda jira dhammaantood loo kordhiyo 12 bilood iyada oo aan wax doorasho ahi dhicin.
Shrika Nairobi ka dhici doonaa, waxaa la isku deyi doonaa, in dhinacyada Soomaaliya ay ka arrinsadaan, isla markaana aragti mideysan ka yeeshaan waxa la sameyn doono marka xilliga dowladdani dhammaado afar bilood ka dib.
Inta laga warqabo, shirka waxaa ka qeyb geli doona hey'adaha ku meel gaarka ah oo ku tegi doona ugu yaraan laba wafdi iyo wufuud ka socda maamul goboleedyada shaqeeya ee ka jira Soomaaliya iyo Ahlu Sunna wal Jameeca.
Inkasta oo aanay sahlaneyn, waa suurta gal in mas'uuliyiinta Soomaalidu in ay isku af gartaan jihada ay tahay in ay u dhaqaaqaan. Laakiin sida looga bartay siyaasiyiinta Soomaalidu way adag tahay in ay wax isku afgartaan, inta dowladaha Gobolka iyo kuwa caalamku ay ku kala qeybsan yihiin aragtiyadooda ku wajahan bisha August in doorasho dhacdo iyo in kale. Hoggaamiye kastaahina waxaa uu ku adkeysan doonaa mowqifkiisa, isaga oo ka gows heysta dowlado iyo ururro aan Soomaali ahayn.